:: My Little World ::: Tai Dong Teochew Braised Duck Rice
မနေ့ က နေ့ လယ်စာကို Tai Dong Teochew Braised Duck Rice သွားစားဖြစ်တယ်။ အရင်နေ့ တွေကလောက် စားလို့မကောင်းဘူး။ အဖျားပျောက်ခါစ အစားအသောက် ပျက်နေတုန်းမို့ လား.. ကျွန်မပြောသမျှ နားထောင်ပေးသူလေး အလုပ်ရှုပ်နေတော့ ပြောချင်တာတွေ မပြောရလို့စိတ်မကြည်တာကြောင့်လား မသိဘူး.. ထမင်းစားလို့မကောင်းဘူး။ ဒါတောင် ဘဲသားတွေကုန်ပြီး ထမင်းနည်းနည်း နဲ့အရွက်နည်းနည်းပဲ ကျန်တယ်။ တခြားမှာ သွားစားရင် အဲဒီလောက်ကုန်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒီအချိန် ဒီဆိုင်မှာသွားစားလို့ သာ ဒီလောက်စားဝင်တာလို့ ပြောရမယ်။ :-)
အလုပ်က အစားအသောက်ကောင်းကြိုက်တဲ့ Business Analyst တစ်ယောက် ဒီနားလေးမှာ နာမည်ကြီး Duck Rice ဆိုင်ရှိတယ်၊ စားကောင်းတယ်ဆိုပြီး ညွန်းရာကနေ ဆိုင်ကိုသိပြီး စားဖြစ်သွားတာ။ ကျွန်မ အစားအသောက် ရွေးတာကို အလုပ်က ရင်းနှီးတဲ့သူ အတော်များများက သိကြတော့ စားနိုင်မယ် ထင်တဲ့ ဆိုင်တွေကိုဆို ညွန်းပေး၊ ခေါ်သွား ကျွေးလေ့ရှိတယ်။ ဒီဆိုင်မှာ ပထမတစ်ခါ သွားစားပြီး အားလုံး ကြိုက်ကြတာ နဲ့နေ့ လယ်စာ စောစော ထွက်စားဖြစ်တဲ့ ရက်တွေမှာ သွားစားလေ့ရှိတယ်။ ပုံမှန်ဆို သွားစားရင် အနည်းဆုံး ၅-၆ ယောက် အတူသွားစားဖြစ်တာ များတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ပွဲကြီးမှာ share လုပ်ပြီး စားလေ့ရှိတယ်။ တစ်ယောက်ကို S$6-7 လောက်ကျတယ်။ ဒီနေ့ ကတော့ တခြားသူတွေ အလုပ်များနေတာနဲ့ ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ပဲ သွားစားဖြစ်လိုက်တယ်။ ဒီတော့ ပုံတွေက သိပ်မလှဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ မတတ်နိုင်ဘူး မစောင့်နိုင်လို့ ရှိတာလေး တင်လိုက်တယ်။
အဲဒီမှာ စားမယ်ဆိုရင် နည်းနည်းစောစောသွားဖို့ လိုတယ်။ ဆိုင်နေရာအကျယ်အ၀န်းနဲ့လာစားတဲ့သူနဲ့မမျှဘူး။ ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ် ထက်နောက်မကျအောင် ဆိုင်အရောက်သွားမှ သိပ်မစောင့်ပဲနေရ ရနိုင်တယ်။ ဒီထက် နောက်ကျသွားရင် ထိုင်ခုံနေရရဖို့အတော်အချိန်ကြာကြာကြီးကို စောင့်ရမယ်။ ဒါကြောင့် ကြိုက်ပေမယ့် Chicken Rice လို အမြဲသွားမစားဖြစ်ဘူး။
Stewed Cabbage with Tau Kee (Beancurd Skin)
Steamed rice with dollop of sauce
No.9Lorong Telok, Singapore 049022
City Front Kopitiam (Near Boat Quay),
Tel: 6532 3226
Cuisine: Duck Rice
Operating Hours: Mon-Sat, 10:30 Am to 2:30 Pm
Price Range: Expect to pay around $4 to $6 for an individual portion
SPECIALITY: The braised duck is succulent and glisteningly moist. An order of duck, innards and rice, withaveggie side dish, isahearty meal. Go early or late to avoid the hungry lunch hordes. Not too late though, their ducks will sell out by 2:30 PM.
စိတ်ဝင်စားတယ်.. သွားစားကြည့်ချင်တယ်.. အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆို အင်တာနက်ပေါ်မှာတွေ့ နဲ့ဒီနေ ရာလေးမှာ သွားကြည့်ဖို့ညွန်းချင်တယ်။ အဲဒီကပုံတွေက ပိုလှတယ်။ အစားအသောက်တွေ အကြောင် အသေးစိတ်လည်း ရေးထားတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 10/08/2008 02:34:00 PM
yes i also like that shop, but i hate on lunch time so crowded....
take care ur health also these days rain everyday...
Wednesday, October 08, 2008 8:07:00 PM
ဟတ်ချိူး တို.လဲ ချီနေတယ်။ ပင်ပန်းလို..
Wednesday, October 08, 2008 10:47:00 PM
Left your blog with drooling mouth. :(
Sar chin tel.
Thursday, October 09, 2008 1:53:00 AM
PhyoPhyo လည်း ဒီနားတ၀ိုက်မှာ အလုပ်လုပ်တယ် ထင်တယ်..
အစ်မခင်ဦးမေ.. >> ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါ.. တော်ကြာ ဘလော့မရေးနိုင်ဖြစ်နေအုံးမယ်
Everest >> နောက်ထပ် အစားအသောက်တွေ အကြောင်း ရေးဖို့ တောင် တွန့် သွားတယ်.. :D အားနာလိုက်တာ..
Friday, October 10, 2008 2:10:00 PM
Mandalay Myanmar Cusine (SG)
လူဘ၀နဲ့စာသင်ခန်း ခြားနားမှု့ 
Red Polo Tee on T-Shirt Day
Apple New MacBook and MacBook Pro
Imperial Bak Kut Teh
Interestingness Photo Wall